Hamarino raha manohana ny famohana ny AppleBook amin'ny alàlan'ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Azo antoka fa efa fantatsika rehetra ny mety hamoha ny MacBook amin'ny alàlan'ny Apple Watch, fa tsy ny Mac rehetra no manohana an'io endri-javatra io ary izany no antony anio dia hahita fomba tsotra be isika hahitana raha toa ka mifanaraka amin'ity asa ity ny Mac antsika.
Mazava ho azy fa ilaina ny mitafy ny Apple Watch amin'ny fotoana hanidiana azy ary tsy maintsy holazaina fa andiana fepetra takiana ilaina mba hisian'ity safidy ity. Andininy manan-danja iray hafa izay lazain'ny mpampiasa anay fa tsy mandeha ho azy ireo izany noho ny fanamarinana dingana roa ary ara-dalàna tanteraka izany, raha ilaina izany dia ilaina izany ny Apple ID anay dia mampiasa fanamarinana singa roa fa tsy fanamarinana dingana roa.
Ho fanampin'izay, amin'ny fotoana voalohany hanokafantsika ny fitaovana raha vao manana ny asany isika dia ilaina ny manampy ny teny miafintsika. Avy eo dia tsy ho ilaina intsony ny manoratra azy io raha tsy vonointsika ny solosaina, ary avy eo dia haseho ilay fampandrenesana fa tsy maintsy ampidirintsika ny teny miafina indray mandeha.
Na ahoana na ahoana, raha tsy azonao antoka raha manohana ny Auto Unlock ny Mac-nao mampiasa Apple Watch, ny sisa tsy maintsy ataontsika dia tazomy ny bokotra Option raha misafidy ny menio Apple> Fampahalalana momba ny rafitra. Rehefa tafiditra ao anaty varavarankely isika dia misafidy Wi-Fi eo amin'ny sisin'ny sisiny ary avy eo mitady ilay safidy "Famohana tsy mandeha ho azy: mifanentana" eo amin'ny sisiny ankavanan'io. Tena asehony antsika izany raha mifanaraka amin'ny safidinay na tsia ny fitaovantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Hamarino raha manohana ny famohana amin'ny alàlan'ny Apple Watch ny MacBook anao